China Ball Point Pens orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Ny penina Ballpoint no fitaovana fanoratana mahazatra indrindra izay ampiasaina hampihatra ranomainty amin'ny tampon'ny ankamaroan'ny olona, ​​na aiza na aiza. Izahay no mpanamboatra matihanina sy mpamatsy penina fanentanana miaraka amin'ny traikefa amin'ny taona, manome penina marobe, toy ny penina baolina, penina vy, bambo ...
Ny penina Ballpoint no fitaovana fanoratana mahazatra indrindra izay ampiasaina hampihatra ranomainty amin'ny tampon'ny ankamaroan'ny olona, ​​na aiza na aiza. Izahay no mpanamboatra matihanina sy mpamatsy penina fanentanana miaraka amin'ny traikefa amin'ny taona, manome penina marobe, toy ny penina baolina, penina vy, penina volotsangana, penina maro loko, penina azo isaina sns.
Mangataha teny nindramina hahafantarana bebe kokoa momba ireo entana. Omeo serivisy OEM sy famolavolana kanto maimaim-poana.
Ahitana ranomainty miloko isan-karazany araka ny namboarina
Mety ho penina fanary, penina azo refable, penina maromaro, penina azo averina, sns.
Ny fitaovana dia mety ho hazo tontolo iainana, abs, toy ny vy vy, sns.
Azo atao pirinty miaraka aminao ny sary famantarana AD & mpanjifa ho an'ny tanjona fampiroboroboana
Teo aloha: Mpamafa
Ball Pen Gel
Penina Cross Ballpoint
Penina Ballpoint mahafinaritra
Sary Etched Pins
Pens mora amidy